Nihabetsaka ny fanentanana hametaka ny mpanao gazety sy ny fampitam-baovao rosiana ho ‘kasinga vahiny’ taorian’ny fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Mihamaro ireo seha-baovao mahaleotena tondroina ho ‘kasinga vahiny’ ao Rosia
Voadika ny 15 Oktobra 2021 3:48 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Español, English
Sonia Groisman, mpanao gazety lazaina ho “mpiasa [mpitsikilo] vahiny”, manao hetsi-panoherana an-tokotanin'ny Foiben'ny FSB ao Moskoa. saripikan'i Avtozak Live ao amin'ny Telegram CC BY-NC-SA 4.0.
Ity lahatsoratra avy amin'ny ODR Editors ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Open Democracy tamin'ny 30 Septambra 2021. Nivoaka eto indray ho anisan'ny fiaraha-miombon'antoka mifampizara votoaty ary nahitsy mba hifanaraka amin'ny endrika mampiavaka ny GV.
THIS MESSAGE (MATERIAL) WAS CREATED AND/OR DISSEMINATED BY A FOREIGN MASS MEDIA OUTLET PERFORMING THE FUNCTIONS OF A FOREIGN AGENT AND (OR) A RUSSIAN LEGAL ENTITY PERFORMING THE FUNCTIONS OF A FOREIGN AGENT
ITY HAFATRA (FITAOVANA) ITY DIA NAMBOARINA SY/NA NAELIN'NY SEHA-BAOVAO VAHINY MANATONTOSA NY FOMBA FIASAN'NY MPIASA (AZO ADIKA KOA HOE MPITSIKILO) VAHINY SY (NA) FIJOROANA ARA-PITSARANA ROSIANA MANATONTOSA NY VOMBA FIASAN'NY MPIASA VAHINY
Ny hafatra eto ambony dia izay tsy maintsy apetraky ny mpanao gazety ao amin'ny seha-baovao mahaleotena Mediazona sy OVD-Info eo amin'ny tranonkalany sy amin'ny fahana media sosialy isak'izay mamoaka lahatsoratra ry zareo.
Efa nitatitra trangam-pampijaliana sy herisetra an-jatony nataon'ny polisy, fiampangana hosoka rongony sy politika (nataon'ny polisy), ary ireo herisetra miorim-paka lalina ao amin'ny rafi-pamonjan'ny firenena ny Mediazona. Ny OVD-Info indray dia tetikasam-pampitam-baovaon'ny zon'olombelona izay mahasahana izay fisamborana sy fitsarana politika rehetra – ampolony izany amin'izao fotoana izao manerana an'i Rosia raha tsinjaraina isa-kerinandro – sady manolotra fanohanana ara-pitsarana ho an'ireo olona voahazona tamin'ny fihetsiketsehana na mba mivoaka ny tranony fotsiny. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay ny openDemocracy nandika sy namoaka lahatsoratra ampolony avy amin'ireo seha-baovao roa ireo mba hanasongadinana ny mahazava-dehibe azy ireo.
Tamin'ny 29 Septambra ireo seha-baovao ireo sy ny mpamoaka sady lehiben'ny fanoratana ao amin'ny Mediazona, Sergey Smirnov, no nambaran'ny Minisiteran'ny Fitsarana Rosiana ho ‘mpitsikilo vahiny’. Nampidirina ihany koa ho ao amin'ny lisitry ny ‘mpitsikilo vahiny’ ihany koa ny ekipa miasa ho an'ny Golos, mpanara-maso ny fifidianana.
Tsy ireo no voalohany.
Sady mpiantraika mivantana no tena manahirana tokoa ny fiantraikan'ny fehezan-dalàna misahana ny ‘kasinga vahiny’ ao Rosia amelezana fampitam-baovao sy firaisamonim-pirenena. Ao amin'ny fiantraikany, ny marika ‘mpiasa vahiny’ no manamarika ilay seha-baovao ho manelingelina amin'ny loharanom-baovao, mpampanao dokambarotra, mpanohana sy mpamaky. Ry zareo ireo, amin'ny fiantraikany, dia tondroina ho ‘fahavalom-bahoaka’, raha ampiasaina ny voambolana sovietika. Mahatonga ny asa andavanandron'ny mpanao gazety ho manahirana dia manahirana tsy mampino [mg] izany.
Meduza, fikambanana mahaleotena manampahaizana manokana amin'ny fanadihadiana lalina mandòna mafy sy ny fanoratana, dia nampidirina ho ao anatin'ny lisitra ‘kasinga vahiny’ tamin'ny volana mey, ary nanomboka tamin'izay nilaza fa nihena lasa very ny fidiram-bola tamin'ny dokambarotra, izay midika ho fahaverezan'ny mpanao gazety manana ny fahaizany. Nanapa-kevitra ny VTimes, izay nivoaka avy amin'ny tapa-porohan'ny gazetim-pihariana ambony kalitao Vedomosti, hikatona tanteraka tamin'io volana io koa rehefa nampiana ho ao anaty lisitra.
Ohatra roa fotsiny ireo. Efa nanambara seha-baovao sy olona mihoatra ny 20 ho ‘kasinga vahiny’ amin'izao fotoana izao ny minisiteran'ny fitsarana, ary hita miharihary fa tsy hihisatra izany. Rehefa nisy ny fanantenana fa hihamaivana ny fikendrena ireo fampitam-baovao mahaleotena tamin'ny andro mafana taorian'ny fifidianana parlemantera tamin'ity volana ity, dia hita ankehitriny fa mikendry ny hamotsy ny fampitam-baovao mahaleotena ny manampahefana rosiana.
Midika izany fa ny olana mahamaika ny olompirenena rosiana – lalàna sy rariny, zo ara-piarahamonina sy toekarena, demaokrasia, ary vao haingana indrindra, ny hetsika miaramila – dia tsy ho voatatitra amin'ny antsipiriany, amim-pitandremana ary ao anatin'ny fahaleovantena. Fa ny hitranga, mila akatona sy atoka-monina ao anaty zoro ‘fanintonana vahiny’ — izay tsy misy porofo — ny fikasana hanao izany amim-pahaleovantena. Rehefa mitady ny seha-baovao hitady porofo ny maha-‘vatsiam-bahiny azy ireo’, dia mitsipaka ny famoahana izany ny mpitsara rosiana.
Ny mampihomehy, araka ny notondroin'i Sergey Smirnov, lehiben'ny fanoratana ao amin'ny Mediazona, taorian'ny fanapahan-kevitra, dia ny manampahefana ao amin'ny Antokon'ny Rosia Tafaray an'i Vladimir Potinina sy ireo sangany mpanohana azy no manana fananana, vola sy ampahana anto-barotra any amin'ny Firenena Tandrefana – nefa ireo fampitam-baovao sy olon'ny firaisamonim-pirenena mbola miasa ao Rosia no ‘kasinga vahiny’.
Tsy azon'ny tsirairay atao ny manohy amin'ny fiasana. Tamin'ny 30 Septambra, dia voatatitra fa notafihan'ny sampan-draharaham-pilaminana rosiana ny tranon'i Roman Dobrokhotov, lehiben'ny fanoratana ao amin'ny The Insider, famoaham-baovao iray niaingan'ny famotopotorana mitondra mankany amin'ny fanapoizinana ny mpitarika ny mpanohitra Alexey Navalny sy ireo olo-malaza hafa. Araka ny noheverina, efa nandao an'i Rosia i Dobrokhotov tamin'ny Aogositra. Ny hafa, tahaka ny manao gazety Ivan Safronov, nogadraina am-bolana miatrika fiampangana famadihan-(tanindrazana).
Niezaka ny mpanao gazety rosiana ny hanamafy orina ny hetsi-panoheran-dry zareo sy ny ezaka ataon-dry zareo ho setrin'ireny fandrahoanana tsy miala sy tsy azo vinavinainy ireny, ao anatin'izany ny fijoroana manohitra ny fampiasana ny fehezan-dalànan'ny ‘kasinga vahiny’ sy ny fanangonan-tsonia vaovao miantso ny manampahefana ny hanaisotra izany – ary ny mpamaky hanohana ara-bola ireny seha-baovao ireny araka izay azony atao. Olona dimy alina sy iray hetsy no efa nanasonia izany fanangonan-tsonia izany.
дорогие коллеги pic.twitter.com/A79FmJaTeF
— зазноба (@katyaarenina) September 8, 2021
Siokan'ny mpanao gazety Katya Arenina ahitana ny pikantsarin'ny tranonkalan'ny fampitam-baovao rosiana sy iraisampirenena maro miaraka amin'ny teny faneva “Tsy Kasinga vahiny ireo, mpanao gazety ireo.”
Niangavy ny mpanohana azy ivelany sy anatin'ny firenena ireo mpiasan'ny fampitam-baovao hanampy amin'ny fampielezana ny torohay maneho ny toe-draharaha atrehin'ny Rosiana mpiray asa amin-dry zareo. Tamin'ny fiandohan'ny volana septambra ny seha-baovao mahaleotena rosiana no nanomboka fanentanam-piraisankina anjotra anoherana ny lalànan'ny firenena momba ny “kasinga vahiny,” eo ambany fanevan'ny “Tsy Kasinga vahiny ireo, mpanao gazety ireo.”
Taorian'ny vaovaon'ny fanondroana azy ireo, nilaza ny ekipa Mediazona tamin'ny fanambaràna nataony tao amin'ny tranonkala:
Сегодня государство хочет, чтобы независимые журналисты исчезли. Мы — хотим делать нашу работу и честно рассказывать о России.
Если этого же хотят наши читатели, то вместе у нас все получится.
Amin'izao fotoana izao ny fanjakana te-hampanjavona ny mpanao gazety mahaleotena. Izahay kosa te-hanao ny asanay sy hilaza tantara amin-kitsimpo momba an'i Rosia.
Raha mitady zavatra mitovy amin'izany ny mpamakinay, ny fiarahantsika no tokony hahavitantsika izany.